Izibane eziphezulu ze-bay ziyinxalenye ebalulekileyo yokukhanya kwezibane zangoku. Ubomi obude, umbala ophakamileyo wokunikezela ngesalathiso, kunye nokukhuselwa kwendalo.Ngoko ke, izibane eziphezulu ze-bay ziya kuba lolona khetho lufanelekileyo kwicandelo lokukhanyisa kwezityalo ezinkulu zemveli, ezinethemba eliqaqambileyo.
Ngoku kwizibane zentengiso kunye nokukhanya okuthe xaxa kokukhanya, kuba inezinto ezifanelekileyo nezizinzileyo, abantu abaninzi bayathanda ukuyithatha bayise ngaphandle, njengekampu, ukukhanya kwezigadi, njl.
Izibane zomsebenzi ezihamba emva kwe-LED
Ukukhanya kwezikhukula kuhambelana nentsimbi yentsimbi. Inempawu zokuqina kunye nokuzinza, okunokugcina ukukhanya kungasebenzi kwaye kungayi kujika xa kusebenza, okwenza kube lula ngakumbi ukusebenza.
Isibane sokusebenza esitshajwayo sinikwa amandla yipakethe yebhetri..Lo liqabane inokuba yi-DC okanye i-AC, kwaye inokutshatiswa ngeendlela ezahlukeneyo zokuxhasa, kangangoko kunokwenzeka ukwenza ukusetyenziswa kwesibane esisebenzayo. ukukhanya ivelisa 20I-lumen ye-00 kwindawo ephezulu. Ukuqaqamba kakhulu, ukubonelela ngokubonakalayo okugqwesileyo nakwimeko emnyama kakhulu Ukongeza, i-liqabane umnini uhlengahlengiso kwaye unokujikeleza phezulu nasezantsi 360°ukujikeleza i-liqabane kweyona ndawo inqwenelekayo yokukhanyisa.
I-LED ephathekayo inokutshaja kwakhona umkhukula liqabane isebenza iiyure ezi-3-6 emva kokuhlawuliswa ngokupheleleyo kwaye inokuhlengahlengisa ukukhanya kokukhanya ngokweemfuno zokwenyani. Ngenxa yebhetri eyakhelweyo, kunciphisa ukuxhomekeka kwintambo yamandla kwaye yenza ukuba uluhlu lwesicelo lubanzi.iqabane unesibiyeli, esilungele ukuhamba nokubeka, kunye ne-liqabane Umzimba ubhityile, unengqondo yoyilo.